एनआरएनए नवौं महाधिवेशन : कोषाध्यक्ष र सचिवका उम्मेद्धवारले उठाए दोहोरो नागरिकताको कुरा - VOICE OF NEPAL
एनआरएनए नवौं महाधिवेशन : कोषाध्यक्ष र सचिवका उम्मेद्धवारले उठाए दोहोरो नागरिकताको कुरा
२२ आश्विन २०७६, बुधबार १२:०१
101 ??? ???????
श्रेष्ठले भने,‘मैले संघको विधान र लगानी समितिमा बसेर काम गरिसकेको छु । संघमा मैले लामो योगदान गरेको छु ।’ त्यस्तै, उनले सरकारले गठन गरेको ईन्भेष्टमेन्ट कमिटीमा पनि आफूले लामो समय काम गरेको बताए । संघको कोषलाई कसरी सवलीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आफूसँग ठोस योजना रहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो संघको कोष सेफ सन्टेनेवल हुन आवश्यक छ । त्यो अहिले भैरहेको छैन्, हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’ उनले कोषलाई सवलीकरण गर्नेबारे आफ्नो तत्काल, अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना पनि सुनाए । उनकाअनुसार तत्काल गर्न सकिने योजनामा ८ करोड जम्मा गर्न सकिने योजना सुनाए ।
कोषाध्यक्षका अर्का उम्मेद्धवार सुदन थापाले संस्थालाई आर्थिक रुपमा बलियो र सशक्त बनाउनको लागि आर्थिक पाटो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि पनि मेरो उम्मेद्धवारी हो । सन् २००८ देखि कार्यसमितिमा रहेर कार्यरत छु । लाखौं नेपालीहरुको लागि कल्याणकारी कोषको आवश्कत्ता छ ।’
उनले आफू जापानको अध्यक्ष बन्दै गर्दा नेपालीहरुको ठूलो समस्यालाई मध्यनेजर गर्दै कल्याणकारी कोष खडा गरेको सुनाए । उनले भने,‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका साथीहरु अंगभंग हुँदा हामीले सहयोग गर्न नसकेको अवस्था थियो । ती अवस्थालाई देखेर, बुझेर र सिकेर तीनिहरुलाई सहयोग गर्नको लागि पाँच करोडको आपतकालिन कोष जापानमा खडा गरेको थिएँ । त्यो कोष धेरै उपयोगी भएको थियो ।’ उनले आफ्नो समग्र उम्मेद्धवारी देशसँग जोड्नको लागि पनि भएको जिकिर गरे । उनले भने,‘१४ वर्षको अनुभवलाई अब उपयोग गर्नको लागि पनि कोषाध्यक्षमा उम्मेद्धवारी दिन लागेको हुँ। ’
सचिवका उम्मेद्धवार अभिमान सिंह बस्नेतले नेपालको सुनौलो भविष्य भनेको नै पर्यटन क्षेत्र रहेको सुनाए । उनले अहिले संघ झण्डैझण्डै चेम्बर अफ कमर्स हुन गैरहेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘टुरिष्ट आउने भनेको मनोरञ्जन गर्न आउने हो । सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ, उनीहरुलाई दिने सेवा तथा सुविधाको लागि ध्यान दिनुपर्छ ।’
उनले एनआरएनए बिल्डिङ सरकारीकरण हुने खतरा रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘यो कुरा उठाउने नेतृत्वमा डिस्कसन गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । संस्थालाई सामूहिक रुपमा अघि बढाउन आफ्नो उम्मेद्धवारी रहेको बताए ।